လွတ်မြောက်နယ်မြေ ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက်ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ….. – Cele Oscar
အိပျမကျဆုံရာ ပွိုငျပှဲဝငျ တဈယောကျ အဖွဈ ပရိသတျတှအေနေ နဲ့ အောငျထကျ ကို စတငျသိရှိ ခဲ့ရပွီး နောကျမှာတော့ ခုဆိုရငျ ကိုယျပိုငျ သီခငျြးခှေ တှနေဲ့ စုံတှဲ သီခငျြးတှကေို သီဆိုလာတာ ကွောငျ့ လူငယျတှေ ကွားမှာ ရပေနျးစားပွီး အောငျမွငျ လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…ပရိသတျ အခဈြတျော အောငျထကျဟာ ဖခငျရဲ့ချေါယူမှုကွောငျ့ ရနျကုနျဆိုတဲ့ မွို့ကွီးကို ကြောငျးတကျ ဖို့ရောကျရှိ လာခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ မပွလေညျ ဖွဈလာတဲ့ မိသားစု စားဝတျနရေေးအတှကျ ကြောငျးထှကျပွီး လှိုငျသာမွို့နယျက စကျရုံတဈခုမှာ အလုပျလုပျခဲ့ ပွီးအဲဒီက အဆကျအသှယျကနေ တဈဆငျ့ အောငျမွငျလာတဲ့သူ့ဘဝရဲ့ အကွောငျးကိုလညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားခဲ့ပါသေးတယျ။
ခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ အာဏာ သိမျးမှုဖွဈနတေဲ့ အခွအေနမှော အနုပညာရှငျတျောတျော မြားမြားလညျး ပွညျသူနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ. အဲဒီလိုရပျတညျခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတှေ ထဲမှာ အဆိုတျော အောငျထကျတဈယောကျလညျး ပါဝငျတာဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောအောငျထကျ ကတော့ လူထု လှုပျရှားမှုကွီးပွညျသူတှနေဲ့တသားတညျးပါဝငျခဲ့ပွီး ဖမျးဝရမျးထုတျခံ ထားရလို့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ တာလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာလှတျမွောကျနယျမွမှောရောကျရှိနပေမေယျ့ ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရတာလညျးဖွဈပါတယျ။အောငျထကျကတော့ ကိုဗဈကူးစကျခံ ထားရတာ(၉)ရကျရှိနပွေီး ဒီနမှေ့အနံ့စရတယျလို့ပွောာထားပါတယျ။
ဒါအပွငျကိုဗဈကူးစကျခံ ထားရတာ မိခငျ နဲ့ အပေါငျးအသငျးတှေ မသိသေးဘူးလို့ ပွောပွ ထားပါတယျ။ ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရတာမို့ အားငယျ နမှောတော့ သခြောပါတယျနျော. အမှနျတရားကို ရရှိဖို့ အတှကျ ပွညျသူတှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျ နရေငျးနဲ့အမွနျနကေောငျးလာဖို့ ပရိသတျ နဲ့ မိတျဆှတှေကေလညျး အားပေးစကားပွောပေးထားကွတာပါသေးတယျနျော… အောငျထကျကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေးတဈခုခုလောကျ ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
အိပ်မက်ဆုံရာ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်တွေအနေ နဲ့ အောင်ထက် ကို စတင်သိရှိ ခဲ့ရပြီး နောက်မှာတော့ ခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် သီချင်းခွေ တွေနဲ့ စုံတွဲ သီချင်းတွေကို သီဆိုလာတာ ကြောင့် လူငယ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစားပြီး အောင်မြင် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…ပရိသတ် အချစ်တော် အောင်ထက်ဟာ ဖခင်ရဲ့ခေါ်ယူမှုကြောင့် ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးကို ကျောင်းတက် ဖို့ရောက်ရှိ လာခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ မပြေလည် ဖြစ်လာတဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျောင်းထွက်ပြီး လှိုင်သာမြို့နယ်က စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ ပြီးအဲဒီက အဆက်အသွယ်ကနေ တစ်ဆင့် အောင်မြင်လာတဲ့သူ့ဘဝရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အာဏာ သိမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ အနုပညာရှင်တော်တော် များများလည်း ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီလိုရပ်တည်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေ ထဲမှာ အဆိုတော် အောင်ထက်တစ်ယောက်လည်း ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်အောင်ထက် ကတော့ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံ ထားရလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေပေမယ့် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ထက်ကတော့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံ ထားရတာ(၉)ရက်ရှိနေပြီး ဒီနေ့မှအနံ့စရတယ်လို့ပြောာထားပါတယ်။
ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံ ထားရတာ မိခင် နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ မသိသေးဘူးလို့ ပြောပြ ထားပါတယ်။ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရတာမို့ အားငယ် နေမှာတော့ သေချာပါတယ်နော်. အမှန်တရားကို ရရှိဖို့ အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင် နေရင်းနဲ့အမြန်နေကောင်းလာဖို့ ပရိသတ် နဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း အားပေးစကားပြောပေးထားကြတာပါသေးတယ်နော်… အောင်ထက်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေးတစ်ခုခုလောက် ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..